Emirates Airlines Vashandi - Global Airway Mabasa - Isa CV nhasi!
Emirates Airlines Vashandi - Gadzirisa Kutanga Nhasi!
Emirates ndege inoshanda neye Dubai City Company kongiresi. Kazhinji kutaura, isu tiri kunyorera pasi rose Airways mabasa nzvimbo. Uye sezvo iwe uchigara pane yedu peji. Iwe unofanirwa kushanyira zvikamu zvedu zvekambani. Verenga ruzivo rwedu rwemabasa. Uye tarisa kuti timu yedu yeHR ingakubatsira sei kuwana basa nhasi. Zvakanaka, basa rinoenda pasina kutaura kuti iyo inokurumidza kukwira ndege chikamu. Chokwadi anogona kukuhaya. Iwo akanakisa emakambani neyakawanda kupfuura 400 mibayiro yenyika dzese yekunaka. Uye danho ravo rakanyanya kuomarara. Parutivi rwakanaka, hwakawanda hwesimba haruite chimiro ichi pasina epasi rese. Semuenzaniso vashandi vepasi rose-vashandi vanobva kuIndia nePakistan.
Ndichiri kushanda munhandare yendege kana kunyange ndege. The mutsva mushandi adzidza huzhinji hunyanzvi hunyanzvi. Uye zvechokwadi, ivo vese vachange vakosha. Gore rega rega, Emirates airlanes vanoita basa revatongi. Chaizvoizvo inopemberera nguva yayo yekujoinha makambani. Nekuti kubvira paunopinda kambani. Zvirokwazvo iwe unomaka mararamiro ako. Izvo hazvishande chete. Nekuti ichi chiitiko chenguva yakareba. Semuenzaniso chikamu chehafu chemusangano kutenderera pasirese. Padivi rakanaka, kubudirira uye kukura kunoshamisa. Semuyenzaniso, Etihad neQatar Airways iri kupfuura nenzira yakasarudzika. Kune rimwe divi, boka reEmirates gore rega rega. Kupa mishumo yekuti ivo mari yakawedzera ye-yemamirioni mashoma. Uye kufambira mberi, kwemakore anotevera emari.
Kubatana neAndia Airlines makambani akanaka
Ko kuita basa nesangano remhepo kunokosha here? Maitiro avo akasimba seEmirates kutsvaga basa anokufadza? Kana mhinduro yako iri hongu? Tinogamuchira yako mbiri mukambani yedu muDubai. Uyezve, tinokukurudzira kuti udzidze zvakawanda nezve Dubai City Company. Kazhinji kutaura kune mikana yakawanda kwazvo inonakidza yebasa. Semuenzaniso, unogona kushanyira the Emirates Group Careers Center. uye Air Arabia jobs section.
Saka tiri kutarisira kukubatsira. Nekuti tiri padanho repamusoro rakakomberedza makambani. Kushanda mumafemu eAirlines. Iwe waizoda kuve nekambani inowanzo taura yakanyanya kupa basa. Kune makambani akati wandei Emirates ari kuhaya. Uye uine izvi mupfungwa, unogona kujoina mafemu akati wandei. Pane rondedzero yemakambani atakagadzira. Uye kubatana navo zvichave zano rakangwara zvikuru kuneVari Kutsvaga. Saka senge inyaya yechokwadi kana iwe uri kuwana mabasa kubva kuAirlines mafemu izvo zvichave kutanga zvakanaka. Isu tiri kupa mabasa aya kutenderedza UAE. Uyezve, Indonezhiya, Kuwait uye kunyange muSingapore. Chero bedzi iwe uri kubatsira makambani kukura uye kuwana mhedzisiro.
Tanga ne Jet Airways Careers pasi vashandi
Kutanga Emirates airlines mabasa. Usakanganwe unofanirwa kuve neruzivo rwakawanda. Kunyanya kune International airway jobs. Zvimwewo Middle East neAsia. Kune rimwe divi, muEurope uye makambani eU.S. anopa rubatsiro rwakakwana nekudzidziswa. Isu tinotaura Jet Airways Careers pasi vashandi senzira yekukurumidza kuwana basa. Parizvino zvavari mabasa mashoma okushandisa. Vamiriri vedu veHR. Emirates ndege inoshanda neDubai City Company. Isu takasimba kukukurudzira kuti utange basa reArline ikoko.
Jet Airways Basa ravashandi vepasi - Ivai vashandi pamwe nechisimba ichi!
The Best Companies in Airways to Work
Air Arabia neKatar, Singapore neEtihad
Air India uye kabhini vashandi vebasa - Emirates airlines mabasa
Isa CV kuFlyDubai mabasa uye Kuwaiti Airways Careers. Uyezve, Singapore Airlines uye mamwe akawanda masangano ekuhaya. Kazhinji kutaura, HR yedu firm iri pano kuti ikubatsire. Uye wana mikana inoshamisa yemabasa mudunhu reGulf kana kuMiddle East. Tiri kuwana nzvimbo dzakawanda dzevashandi veInternational uye vakuru vakuru. Naizvozvowo kupa vanhu mabasa ekutsvaga basa kubva kuIndia uye Pakistan. Padivi rakanaka uye Qatari uye Vashandi veSaudi Arabia variku kurova timu yedu yekutungamira. Saka, ndapota tumira kutangazve kune kambani yedu kana kumakambani ekuhaya ari pazasi uye mirira mabasa anoshamisa kuti auye uye tanga kurarama Airline kurota. Emirates ndege inoshanda ne Dubai City Kambani iri kumirira iwe!.
Isa CV ku FlyDubai mabasa uye Kuwait Airways Basa. Tauya pano kukubatsira iwe kuwana inoshamisa mabasa mukana kuMiddle East. Emirates ndege inoshanda neDubai City Company ikozvino iri kutanga kufamba-mukubvunzurudzwa. Tiri kuwana dzakawanda nzvimbo dzevashandi veInternational kutsvaga. Uyezve vanhu vanobva kuIndia nePakistan uye kunyange Qatar. Tumira kutangazve kune yedu kambani kana kumakambani pazasi.
Ndiyo dzakanakisa ndege dziri munyika kuti dzishande!
Imwe yedzakanakisa sangano kushanda pasi. Ndekushandira makambani eAirlane. Padivi risiri iro, hapana ndege dzakaipisisa munyika. Nekuti tiri kuvashandisa nguva dzese. Saka, maka maka anogara achifamba. Nezve izvi mupfungwa, kambani yedu yakaratidzirwa makambani ekubhururuka kuti ashande. Uye chii muripo kana muhoro uye kwaunogona kuwana kufamba-mu kubvunzana. Kazhinji, vamwe vacho vanoshamisa vanotsvaga basa. Mazhinji emakambani ari kuhaya kuMiddle East.
Saka, zvaunogona kuita nechikamu ichi. Iyo kambani yechitanhatu yegore rose yekubhadhara inoda zvidimbu zvemashoko. Ridza iyo yakakosha ruzivo rwemhepo ndege indasitiri mabasa inopa. Uyezve, zvichibva pamhando yekushumirwa. Munhu anogona kutarisa kana zvakakodzera kuwana basa paneakanongedzwa kambani. Kune rimwe divi, iwe unogona kuona pane-basa kuita. Uye kupi kwekunyorera kunyangwe semushandi wePhilippines. Zvakare, tora basa rekugadzirisa mabasa kubva kunze kwenyika. Uye kuitira kuti mutarise kuti chii chinodiwa kuti basa riwedzere muzviyero. Neiyi Emirates ndege inoshanda kambani. Ingori chipenga chako vari kubira vashandi veRussia.
Nzvimbo yepamusoro yepamusoro yendege inoratidza kuti yakanakisa mabasa inopa. Uye uine izvi mupfungwa, tiri kutaura pamusoro pemubairo. Uyezve, basa revatengi ndiyo kiyi huru kune iyi mabasa. Nekudaro, iwe haufanire kupa yakasarudzika yakagadzirwa CV kuti ive chaiyo. Zvese zvaunoda kuti uite tinya chete pamufananidzo. Wobva wadzvanya pasi kuti uone Qatar, Kuwait uye Singapore neAAE. Ndege dzakanakisa dzepasi rose kushanda Emirates ndege dzinoshanda. Uye isu takaverengerwa mune nyore kutenderera kurongeka nehuwandu hwavo hwekuiswa basa.
Inonyanya kukosha Airways kune dzimwe nyika!
Pazasi iwe une pfupi nzira yemakambani iwe unofanirwa kutumira CV yako. Uye uine izvi mupfungwa, dzikisa pasi uye iwe uchaona zvimwe zvakawanda tsananguro. Saka, Emirates ndege yekushanda kana vakakukodzera. Iwe unogona kuzvibata pachako kuChikurumidza application pamhepo. Ndinovimba uchadaro wana mhedzisiro kuEmirates ndege dzinoshanda neDubai City Company. Dzvanya pazasi pane zita rekambani uye link yekushandisa.
British Airways vashandi
Air Arabia mabasa
Etihad Airways mabasa
Endai mabasa ekumhanya
Qatar Airways mabasa
Mapurisa ePoreji anoshanda
Sei zvakakosha kushanda kweEmirates Airlines Careers?
Mazuva ano, vakawanda vanotsvaga basa. Kutarisa kwemabasa anobhadhara zvakanyanya. Uye chete makambani makuru ndiye ari kupa izvo. Iyo yepamusoro 10 Emirates Airlines Careers mikana. Zviri nyore kupfuura $ 150,000 pagore. Iyo Dubai City Kambani iri kuhaya zvakare vanozviita. Uyezve, tauya kuzokubatsira. Sezvineiwo, maEmirates anouya pamusoro uye anotobhururuka Dubai. Chikwata chedu chiri kutarisira kukubatsira iwe kukubatsira iwe kuti uve mushandi wavo. Nekuti mubhizinesi ravo ndeyekutora vanhu vazhinji sevanogona. Kazhinji, kutsvaga zvinoshamisa mabasa zvinotora nguva. Mune inopfuura 80% yeAirlines mabasa. Iwe unozofanira kudzidza hunyanzvi hwakawanda. Imwe yemienzaniso ndewehunyanzvi hwekushandira vatengi uye vanoita zvemari. Zvakare pamwe nezviwanikwa zvevanhu. Saka mazana emakambani anogona kunge ari uyo anogona kukuhaya iwe uchafanira kukudzidzisa iwe.
Asi isu tinosarudza chete rakasarudzika vashoma vavo. Nekuti isu tinoziva kuti kana iwe uchaenda pamwe nepamusoro 20 kana 30 yavo. Uye nenzira yako mukana wekutsvaga basa kuDubai unowedzera. Uye sezvatinoisa makambani akanakisa. Iko hakuna kuvhunduka kuti iyo yakanak kwazvo yakavakirwa muMiddle East. Zvirokwazvo muQatar Saudi Arabia Arabia uye United States zvakare. Emirates airlines mabasa ane Dubai City Company ichava yako huru dhizaini.
Upenyu uye huwandu hwemabasa
Semunhu anogona kuve mushandi mune iyi mhando yemakambani. Iwe unogona kugadzira yakakura mari uye kutanga hupenyu hunoshamisa. Mari yako zvirokwazvo ichakura uye mutengo wekurarama uchaderera. Zvakaoma kutaura kuti ndeapi emakambani akanaka. Nekuti ivo vese vanopa zvinoshamisa mabasa kune vatengi vavo. Zvakare pamwe nevashandi uye Management nhanho yehukama tsika. Saka ngatitangei kubva kumabasa ekutanga.
Dubai City Kambani mune zvakanyanya pfupi pfupi yevashandi. Kuratidza iwe yakanakisa mazinga eAirlines bhizinesi. Kubva pane yakatsva nzira kune bhizinesi investor. Zvese izvo ndezve kutsvaga basa. Chete chikamu chebhizinesi iri kusiyana. Iva nekutarisa pazasi kwezvikamu zvakasiyana. Iwe pachako uchitarisira kuti uchaita tsvaga zvishoma zvishoma nezverudzi urwu rwebhizinesi.
Ungashamisika. Nezve mari yakawanda yaungawana iwe uchishanda mukupinda-level mabasa. Kunyanya neAirline mabasa emota. Saka, kutaura kazhinji, mabasa ekutanga emabasa aunowana inoshamisa Dubai Guta. Vari kuchenesa mabasa, kuchengetera imba pamwe nevatengi sevhisi. Uye kumirira vatengi tale vatengesi. Sezvineiwo, iyo yekutanga vatengi masevhisi evashandi akanaka kuenda. Kune rimwe divi, isu tinokuvhurira zvishoma nzira iri nani. Iwo mabasa ane matikiti anotengesa uye general zvinhu mushandi. SeAirlines inotengesa mahofisi uye manejimendi ehofisi.
Semuenzaniso, iwe unogona kuzviwana iwe uye wotanga kutengesa masevhisi online. Rutivi rwakanaka chete internet rave richikura. Saka, iwe uchave uine inzvimbo yakanaka uye yakanaka yekushanda. Saka ngatifungei kuti unogona kushanda muhofisi. Uye mukureba-refu, iwe unogona kuve mutsva mutsva mushandi. Semuenzaniso, tanga kumisikidza mabasa ekutanga. Kugona chose mikana yebasa padanho rekupinda yemabasa irikudhara mota. Nekuti izvozvi Airlines makambani anoshanda nemamwe mafemu kuTurkey.
Kupinda level level jobs within Industry
Kune anopfuura zana zana masevhisi kune rimwe nerimwe re makambani aunogona kushanda. Imwe yemienzaniso yeiyo iri kubatira vamwe vanhu vakuru mune dzakawanda zviitiko ndeiro rebasa remabasa. Kungoti nekuti zvakanyanya kuoma kuita zvekuti havasi vese vanozotora mukana kuzviita. Kuchenesa matafura uye kubvisa kunze marara. Kana kunyange kupurinda pasi. Ndizvozvo mabasa ayo unogona kutarisira kupinda muzinga. Ehe, kana iwe uine dzidzo inoshamisa iwe unogona kutanga semaneja wekudzidzira. Uye uine izvi mupfungwa, mibairo yako inokura zvishoma. Asi iwe uchave iwe unokwanisa kukwanisa kune chinhu chakanyanya kunaka. Kunyanya nemubhadharo muDubai guta mu Abu Dhabi. Emirates ndege inoshanda neDubai City Company zvirokwazvo inofanira kuenda.
Inotevera nhanho mushure mekutanga chikamu chepakati mikana yekutarisira. Uye mune urwu rudzi rwemabasa, iwe uri mamiriro ezvinhu. Asi iwe unoda kurimira mabasa muDubai. Nekuda kweAirlines Industries. Ini zvakare ndichakura uye ndotarisira kukura mune ramangwana. Saka ivo vachakupa iyi chinzvimbo che4 yakakomberedza 10 makore. Uye ikubatsire iwe kuti ubudirire. Chero chero mafungiro iwe uchazoda kushandawo vatengi. Nekuti uchave pakati pekupinda-chikamu uye Senior Management saka. Ndinoda kuudza kuna director board. Saiwo mamaneja ezvemagariro evanhu, mamaneja ekushambadzira, vatariri vekushandisa. Vese vanhu avo vanenge vachiongorora mabasa ako. Uye kukubatsira iwe wakamhanya mukati mezuva. Pane rimwe divi, vanhu vari pasi pevatariri vako zvinoreva. Izvo zvinoda kuve zvinorongeka newe. Saka inguva yakareba inofamba.
Vatungamiri veIndonesia Industries
Saka ngatifungei kuti uchashanda maawa e8. Mamwe maviri iwe aunotora kumba mutakuri mweya anozove mubairo. Kupfuura 80% yemaneja muAirlines Industries. Kusvikira director-level chinzvimbo mukati me10 makore. Nekuti mazhinji emakambani anodada neizvozvo. Iyo new director iya inotanga pakupinda-level. Vanoverengeka vacho vakatonongedzera kushambadzira. Kuti ivo vice President. Kutanga semubatsiri wekiriniki mune iyi firm. Saka zvisinei kuti ndeupi chinzvimbo chekuratidza kuti ndiwe. Uye zviripo zvisinei iwe kwawakabva kunyangwe Pakistan. Zvakare, South Africa kana Saudhi Arabhiya. Kana iyo kunyange Philippines vese vevanhu vane mukana neAirline indasitiri inopa mikana.
Senior level of Management Careers
Mazhinji emakambani kutenderera nyika. Chaizvoizvo achipa pekugara kwevashandi vavo. Kubhururuka matikiti kuenda kumba kwavo kana vari vatorwa. Dzidzo yevana. Uye chinoshamisa iwe chinotamisa hupenyu kuve. Mukuwedzera, kuti ndikupinze mune izvo zvinokupa iwe laptop uye yemitambo mota. Saka, mabasa eAirlines akanaka kuenda uye akakosha kumirira. Kana iwe zvidzorere neBMW. Kana kunyangwe neFig. Uye yepakati sara kumba nedziva rekushambira. Zvinofanira kutaurwa, munhu iyeye anoziva bhizinesi. Kune rimwe divi, kana uchida kunyange kufambira yepamusoro. Kune CEO kana kune kunyange yakakwirira chikamu kupfuura icho. Ndiyo chikamu chemushambadzi. Uye kune nzvimbo uko vanhu chaizvo kubhururuka ndege. VIP inodhonzera motokari mafairi uye kunyange kuve neayo helikopta.
Air pilots mabasa uye vatungamiri
Saka, kana iwe uchitsvaga basa nepuru yekushambira. Uye mararamiro anoshamisa seMamirioni. Iwe unogona nguva dzose tora izvozvo kuDubai Company. Kune akati wandei vatorwa vanowana basa kutenderera pasirese. Uye kusiya iyo yakanyanya kunaka yakakwira yehupenyu. Tichifunga izvi, tiri kutaura nezve maIndia uye Pakistani. Saka kana iwe wakabva kunyika ino. Iwe unofanirwa zvirokwazvo kuwana basa repamusoro revatariri. Nekuti pane rumwe rutivi, kana iwe uri kutsvaga nzira dziri nani dzekukura. Unogona kunyange kuva pivha. Pane imwezve nhanho yevakuru maneja mabasa muindasitiri yendege. Zvakanyanya akabhadharwa mabasa epasire kutenderera pasirese. Semuenzaniso, mutyairi wepamusoro anogadzira matani emari. Kana maneja maneja pamwe nemaneja wedunhu. Vari vaviri vari kuita mari yakanaka kuMiddle East ?. Izvo, sezvaitarisirwa, zvinovatendera kuti vatyaire mota yakanaka.
Mutengesi webhizimisi uye vatenzi veAline
Muchikamu chino icho chikamu chikuru chemari. Mazhinji emabhizimusi emari uye varidzi ve indasitiri yeAirline mabhirioni. Uye zvechokwadi, pane hombe kusiyana kwerudzi. Vakawanda vekuAmerica pamwe nevaCanada. Uyezve, maArabhu kubva kuUnited Arab Emirates. NaVapakati Middle East vagari vemo. Kugadzirisa urwu rudzi rwebhizinesi. Kunyangwe Yake Yakakwira Sheikh Mohammed bin Rashid ane chikamu cheiyo. Uye zvechokwadi mari yakawanda mukati Rudzi urwu rwebhizinesi. Nekuda kwehukama hwayo hwebhizimusi repasirose. Wese munhu anozviziva uye kuita mari. Kuwanda kwevanhu ndiko kushanda ipapo inorondedzerwa ruzivo. Uye isu hatisati taziva kuti bhizinesi iri kuita marii. Chegumi muzana chete chevanhu vanoshandira hurumende vanoziva izvozvo nenzira kwayo.
Airlines ari kuita mari yebhizimisi
Saka kungova bhizinesi investor mune yerudzi urwu bhizinesi. Iwe unozofanirwa kuve nemabhizinesi akasiyana siyana munguva yakapfuura. Vanhu vazhinji havatomboziva mumunhu. Uye chokwadi kuti yakadii awa vanhu vari kugadzira. Chegumi muzana chete chevanhu vakadana hurumende vanoziva mashandiro anoita zvese izvi. Nekudaro, kungova wekumisikidza bhizinesi mune yerudzi rwebhizinesi. Nenzira, iwe uchafanirwa kuve nemabhizinesi akasiyana munguva yakapfuura. Nekuda kwechimiro chekudyara. Uye zvechokwadi, shanda mune iyi mhando yezvibvumirano. Inoda ruzivo rwakawanda. Asi iwe unofanirwa kuve nechokwadi chehurumende nemazita uye nevamwe vamiriri vevashoma izvo uri munhu chaiye.
Nha .1 Emirates Group Careers
Boka reEmirates kuri kubatira vanotsvaga mabasa. Zvakanaka, kusvika ikozvino iyi kambani ndiyo yakakura femu. Uye uine izvi mupfungwa, zvichave zvakakosha kuwana chinopihwa basa kubva kwavari. Emirates iboka remakambani. Saka, sekureba iwe uchinyorera kamwechete. Iwe uchave nazvo chikumbiro chako nemakambani akati wandei. Mukufamba kwenguva, zvichave zvakakoshesa. Iyi kambani inowanzotaura ndiyo kambani yepamusoro muUnited Arab Emirates. Iyo nguva yamakatanga nekambani iyi. Iwe uchanzwa simba reDubai uye Abu Dhabi pesvedzero mubhizinesi.
Nha .2 FlyDubai Careers
Fly Dubai zvirokwazvo zvakare imwe yesangano rinofambira mberi. Ne flydubai iwe unogona kazhinji kutaura kusaina kune zvekuzivisa zvebasa. Uyezve kuwedzera yako data. Uyezve, nyora yako CV. Uye kunyange kutarisa kubatsirwa uye tsika. Saka kazhinji kutaura kana iwe uchitsvaga rubatsiro rwekubatsira. Iyo Emirates ndege inoshanda neDubai City Company iri pfungwa yakangwara. Sezvazviri, kambani iyi iri kutsvaga kukubatsira. Uyezve, uye iwe unofanirawo kurodha yako yakagadzirwazve kutangisa ipapo. Uye isa imwe yekuzivisa basa. Nekuti iyi kambani yaizoisa iwe mukufamba kwenguva.
Kwete .3 Air Arabia Careers
Air Arabia inopa anofarira mabasa anopa. The mabasa anopihwa nekambani mabasa epasi rese akatenderwa mabasa. Paunenge uchitsvaga kufarira kwako mabasa kunopa. Kazhinji kutaura, kambani yeAir Arabia ichakuhaya. Zvakare, iyo kambani HR mamaneja ari kukushuvira zvakanyanyisa mukutsvaga kwako basa. Kutanga navo unofanirwa kudzvanya kunyorera. Wobva wasarudza chero chinzvimbo. Zvadaro, pakupedzisira, iwe unogona kudzvanya pane Apply Zvino bhatani. Iwe unogona kuve nebasa rekuchinja maneja. Uyezve mamaneja ekutengesa muSaudi Arabia neinjiniya chinzvimbo muTurkey. MuMiddle East kana Europe. Emirates yendege macareer nekambani yeAir Abarbia. Chaizvoizvo ichave zano rakanaka.
Emirates airlines Air Arabia Mabasa
Nha. 4 Air India Jobs uye Careers
Air Arabia inopa anofarira mabasa anopa. Iwo mabasa ayo anopihwa nekambani mabasa epasi rese akatungamirwa anopa. Uchiri iwe tsvaga kwako kufarira kumabasa ekupa. Kazhinji, kambani yeAir Arabia inoshandira vashandi vatsva. Ehezve zvakare muUnited Arab Emirates. Emirates airlines mabasa ine Dubai City Kambani ndeye smart kufamba. Parizvino iwe unofanirwa kutora mafaera. Uyezve, tarisa zvidimbu zveruzivo nezve chaiyo basa raunopihwa. Uye wobva wanyorera iyi kambani.
Nha. 5 Wizz Air Jobs uye Mabasa
Iyo Wizz Air kambani iri kubhiza zvakare yeEmirates ndege dzebasa. Kazhinji kutaura, ivo vari kupa matatu marudzi emabasa. Yokutanga mukana webasa iwe unogona kuwana kunyange muPoland. Ko kabhini vashandi vebasa mikana. Kune rimwe divi, iwe uchave nemabasa emahofisi. Uye zvichava izvo kushanda kwevanhu, kushambadzira department. Kwechokwadi nerudzi urwu rwemabasa kazhinji, iwe waizoshanda nemapepa uye makomputa. Uye chechitatu sarudzo neWizz Air kuva mutyairi. Kazhinji kutaura, iyi ndeimwe yemakambani akanakisa. Nekuti vatyairi vendege vachibhururuka kubva kumaguta avo. Uye zvechokwadi, kambani inopa kutsigira kuzere uye kudzidziswa nenzvimbo yepamutemo. Saka Dubai guta rekambani rinopa zano iwe kunyorera iyi kambani. Chikwata chedu chinotenda chakasimba kuti chichave chakakodzera miniti imwe neiyi kambani. Emirates ndege inoshanda ne WizAir basa nzvimbo yepaIndaneti zvichava zvakanaka kutanga.
Nha. 6 British Airways Careers
Imwe kambani yeEmirates ndege inoshanda. Panguva ino neUnited Kingdom Company. British Airways ikambani hombe, inoshandira muLondon, Dubai uye New York City. Saka, kutsvaga kambani yakanaka inzira yekushanda kwavari. Iyi solid, inowanzo taura, ichiroja muHeathrow Airport. Bhizinesi rekuBritain rine simba rekuita zvisingakanganwike zvevatengi zviitiko. Kana chimiro chako chichienderana nezvinodiwa zvavo. Kwese kwavanoshanda, pasi kana mumhepo. Unogona kuva mukana wakanaka navo. Kunyangwe iwe uine ruzivo rwekutungamira kana munhu achangobva kudzidza. Kana kunyangwe iwe uchangotanga basa muUK Unofanirwa kuedza rako reBritish Airways basa.
Kwete .7 Etihad Career Airways
Saka kubva kumabhaini vashandi vebasa kusvika kuchirongwa uye kuronga mabasa pamwe nemabasa ekutyaira anoisa uye Commerce anotakura anoita kambani iyi inonyatsopa mukana wakanaka wekukura neUnited Arab Emirates. Izvo zvichange zvichishanda kwazvo kwazvo zveDubai uye Abu Dhabi. Uye zvechokwadi, bhizinesi iri rakavakirwa paCentre yebhizimusi rekugamuchira vaeni pakati peMiddle East. Kana iwe uine shungu pamusoro pekushandira vanhu. Iyi kambani zvirokwazvo ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzeboka rebasa revashandi. Unogona kuwana basa racho semutyairi kana SFI basa mukana.
Nha .8 Norwegian Airline Jobs
ChiNorway ichi chimwe yakasimba kambani yekushanda. Nekuti iyi sangano ine imwe yeya nyowani ndege dzendege pasi. Uyezve, pamusoro pe260 ndege idzva dzakarairwa. Saka, zvichingoenderana neiyo nhamba. Izvo zvichave zvakakosha kune batana nevamiriri veHR management. Iyo yeNorway Mhepo inodzora kukumbira kwemazana mazhinji akavhurika mukati mekambani munguva pfupi iri kutevera. Izvi zvinoreva kuti kambani inoda vanhu vazhinji kuti vabatane neyavo Mhuri yeNorway. Uye zvechokwadi, kana uri umwe wavo. Enda mberi uye nyora zvinyorwa zvako Emirates vanoshanda neA Dubai City Company.
Nha .9 GoAir Airline Employment
Saka nguva ino isu tiri kuongorora kuenda ikambani yeIndia. Iyi kambani ndeye kambani yakanaka kwazvo muIndia zita rayo enda Airlines India Limited. Zviri zvekuongororwa kwemapoka eIndia uye chinangwa chavo ndechekupa yakachengeteka yakachengeteka uye nekufambisa kwakanaka. Kune avo vese evashandi uye vatengi. Sezvineiwo nenguva yese yavanenge kuchengeta hanya yekubatanidza mabasa uye inobata nevatengi vavo. Uye ivo vanokwanisa kugadzira yakasarudzika sevhisi. Kazhinji kutaura, kune vanhu vakasiyana uye yavo mukambani musarudzo.
Nha .10 KLM Royal Dutch Airline
Imwe kambani inoongororwa firimu redu ndeye KLM iyi kambani iri kubhiza chaizvo vavaki pamwe nevashandi vepasi uye vanhu vane ruzivo rwakanaka mukushambadzira. Iwe unogona kuseta nzira dzese dzinowanzo kutaura basa yekuzivisa uye iwe unogona kuwana mabasa munzvimbo dzinoverengeka. Uyezve USA USA Canada uyezve, hongu, isu tinoreva. Isu tiri kuraira zvine simba kuti tiyedze kuwana basa racho. Zvingave zvakatiomera kuzviwana kubva kuIndia uye Pakistan. Asi zvichava nyore kuwana kubva kuDubai neSouth Africa uye zvirokwazvo vashandi veInternet. Ndichawana basa uye muhoro wakanaka waizobhadharwa.
Nha. 11 Virgin Atlantic
Ino ndiyo nguva yeMhandara Atlantic ndiyo yepamusoro kambani pasi rose kambani iyi kupa yakawanda mikana kubva kubva kubasa revatengi semuenzaniso kubva kumahofisi emasevhisi kuenda kunzvimbo yevatengi. Unogona kuwana pamwe navo ese emikana mikuru yavanayo. Unogona gara uchiwana basa muhofisi. Uye kubva pachinzvimbo che manejimendi, unogona kuongorora izvi simbisa uye iwe uchashanda zvakare kumashure kwezviratidziro saka kana uri munhu ane tarenda iwe une akasiyana siyana mabasa. Kune rimwe divi, isu takatakura zvinhu kubva kuma supercars kusvika pasisina zvekutyaira uye uchaita. Uye Injiniya yekushanda inozove uye yezvidzidzo.
Pane rimwe divi, iwe uchave nenzvimbo yekutungamira. nekambani ino, iwe uchave uchitungamira uye nekupa mubayiro vanhu vanozvivandudza ivo pachavo. Uyezve tine hunyanzvi uye mashandiro. Uye kazhinji kutaura, kuwana basa iri chaiko. Iwe unozofanirwa kuve ne degree reinjiniya. Uye yakawanda yebasa ichaitirwa muLondon. Uyezve tine vatyairi vemangwana uye vanhu vanobhururuka. Semuenzaniso, bhururuka pane ndege dzakagadziriswa zvakanyanya.
Nha. 12 Jet Airways Career mikana
Emirates ndege inoshanda neJet Airways. Zvakanaka, Jet Airways iri kubhururuka nepasirese. Unogona kuwana akati wandei weArkansas nekambani iyi. Uye kune mikana yakawanda. Semuenzaniso, iwe unogona kuwana mukuru wekushanda nendege, pasi pemikana yemabasa. Naiwo mukuru wekutanga. Kubhururuka ndege kune rumwe rutivi isu tine Revenue manejimendi zvakare mashandiro emabasa mukati mekambani. Kune rumwe rutivi, iwe unogona kuwana kunyange mabasa evanamukoti. Uyezve basa revatengi.
Saka ngatizvitarisei iyo yese iyo mabasa iyo kambani ichapa. Zvakakodzera kuti uzvitore. Nekuti kunyangwe iwe ukawana chinzvimbo chepamusoro. Jet Airways ikambani yakakura kwazvo. Kuti ivo vachakupa iwe kunyange mikana yakawanda. Uyezve, iwe unogona kuzvirovedza. Uye uve nyanzvi yepamusoro manejimendi. Saka, Dubai guta kambani inobatsira expats. Kuti uwane navo tinya pamufananidzo pazasi. Kazhinji, kambani iyi yakanakira mabasa muMumbai. Saka kana iwe uri muIndia bhizinesi. Iwe unofanirwa zvirokwazvo kutumira CV kukambani ino.
Nha .13 Kuwait Airways Careers
Emirates airlines inoshanda ne Kuwait Airways mabasa. Imwe kambani yatiri kuda kuongorora. Is Kuwait Airways. Nekuti kwaunokwanisa ongorora tsika yemakambani. Zvakare, iyo kambani inopa yakawanda nzvimbo. Semuenzaniso, zvakazara mabasa evashandi vepasi rese. Saka huya kana iwe uri kutsvaga kuva mutyairi unogona kutanga nekambani iyi. Kune rumwe rutivi, kana iwe uchida kuwana mari yemikana mikana kana kunyange Tekinoroji yekambani yemari vacancies iwe unokwanisa kuwana basa navo. Uye pakupedzisira tinazvo zviwanikwa zvevanhu mabasa uye mashandiro. nenyaya yechokwadi, iyi kambani iri kuhaya kunyange yevakuru chinzvimbo chinzvimbo. Dubai guta kambani chokwadi iri kutyaira Basa Vanotsvaga iyi webhusaiti. Nekuti tese tinoziva mabasa atinogona kupa. Iwe unokwana kuzvibata iwe uye ita huwandu hwakanaka hwemari.
Nha. 14 Air Malta Jobs
Imwe kambani yatinoda kukwazisa kwauri imhepo Malta. Iyi kambani, kazhinji kutaura, kutora kubva kune imwe nyika diki muEurope. Asi isangano rakakura. Uye kazhinji kutaura kwakanaka kwazvo chero nguva. Saka, kana iwe uchizoda kutora kambani uye nzvimbo itsva yekushanda. Edza Air Malta sangano. Ngatifungei iwe kuti unoda Europe uye kukushandira iwe muMalta. Chokwadi akupe kutanga kwakanaka. Dubai kambani yeguta inogara yakatarisana. Kubatsira Vanotsvaga basa uye tinodada newese munhu mutsva. Chero chii chaisaina kusaina kune yedu firm ..? Kana kune chero yeEmirates Airlines Careers.
Nha. 15 Mabasa paQantas
Basa iri kuQantas Airlines. Mumwe kambani yakanaka kwazvo yekushandira. Uye kwete chete Emirates Airlines Careers. Zvakanaka kune vashandi, kune akawanda mamwe makambani. Uine izvi mupfungwa, vanotsvaga basa vanotarisa kuve chikamu cheboka reQantas Asi izvo hazvisi nyore, mune dzakawanda zviitiko zvinoda kubva kune nhengo nyowani zvokwira zviyero. Ndokuzo kuenda kune dzakasiyana matambudziko. Iyi kambani ichashanda munzvimbo yakaoma zvakanyanya. Makwikwi mazhinji anoshanda pamisika yeAirlane. Ichi chikonzero nei Qantas kazhinji vaitarisira yakawanda kubva kune vashandi vavo. Sezvineiwo, maneja anotarisira kuzadzisa zvisingaite. Padivi rakanaka, kambani yaigara ichitsigira mamaneja echikwata chavo. Kudzidziswa uye kudzidzisa hutungamiriri hwakanaka hwakaita sei. Uyezve, sei kuvimba uye kuraira vamwe neruremekedzo. Tarisa uone pazasi.
Nha. 16 Mabasa paAegean
Sangano reAegean, imwe femu yeEmirates Airlines Careers. Kazhinji kutaura, iyi kambani inoshanda kubva padanho repamusoro. Basa ravo nderekusimudzira kure kure pakati pevatengi nevashandi vavo. Ivo kutsvaga kukuunza padyo pane izvo zvaunoda kuwana. Kune rumwe rutivi, pakanga paine yakawanda yeVafambi uye mapasita uye kuyedza kuvapa ivo vachienderera mberi masevhisi padanho repamusoro. Pfungwa huru ndeyekuremekedza nekusimudzira mumusika. Zvakare nekushandura vashandi vavo uye kubatsira kutsigira varoorani mukati memunharaunda dzenharaunda.
Kune vanopfuura mamirioni e12 mamirioni kubva ku2012. Kubhururuka kupfuura 145 kuenda uye ivo vanogadzira zvinopfuura 1 bhiriyoni Revenue. Munyika dze45. Uyezve 89% yesangano uye kubatsira nenzvimbo yakachengeteka. Iyo kambani ndeye Star Alliance mubatiri uye ivo vari kuisa mari yakawanda Investment. Saka zvigaro zvako zvinowanikwa munguva pfupi kwazvo. Uye zvekuuya vashandi izvo ingave iri mukana mukuru wekukura.
Nha. 17 Jobs paAustria Airlines
Australia Airlines zvakare vari vatambi vepamusoro mumusika. Pari zvino kambani inoshandira nzvimbo dzinoverengeka dzekugara. Uchifunga izvi, izvo zvinokatyamadza pamwe neyemapassenger service mumiririri, mutyairi, mabasa ehunyanzvi, hofisi yemusoro uye kunyange kudzidziswa. Pane rimwe divi, iyo kambani inopa akawanda matipi uye nhungamiro iyo iwe yaunogona kushandisa kune Emirates Airlines Careers. Imwe yemienzaniso iyo Austrian Airlines ine blog inoshamisa. Ivo vari kunyora chaizvo nezvechikwata chavo nezveFleet yavo uye nezve mutyairi wavo nemasevhisi. Ehe, zvinotaridzika zvinoshamisa uye zvechokwadi vanhu vazhinji vanogona kuwana kukosha kubva kune iyo blog. Saka ita zvishoma uye tinya pamufananidzo uyo unokutora iwe kune yavo peji. Zvamazvirizvo enda mberi uye nyorera basa uye edza kuzviwanira rako basa.
Nha. 18 Jobs ku South African Airways
Kuwana basa hakusi nyore kuita. Imwe kambani yatinoda kuongorora muchinyorwa chino. Ndege dzekuSouth Africa dzinowanzo kutaura kambani iyi Ndege-dzakawanda-kuhwina Ndege. Iyo hofisi huru yemusoro yakavakirwa muHarrisburg yako muSouth Africa. Iyo kambani inoshumira 78 kuenda kune dzimwe nyika. Padivi risina kunaka hazvisi nyore kuwirirana neiyo ndege. sezvo ivo vari mamwe akanakisa kubhadhara Airlines. Vanhu vazhinji chaizvo vanoedza kuti uwane basa navo. Uye isu tinofanirwa kuyeuka kuti South Africa haisi nyore kuwana Visa. Saka iwe unofanirwa kuramba uchienda yega kamwechete muvhiki. Uye edza kuona nezvezvazvino mabasa. Emirates ndege inoshanda neDubai City Kambani nhungamiro inotsvaga yakangwara kuti itange nekambani iyi.
Nha. 19 Lufthansa Careers
Lufthansa kambani muchokwadi haifanire kuiswa kune chero munhu. Zvirokwazvo mumwe wevatambi vakakura muindasitiri yendege yenyika. Uye iyo nguva iyo kambani iyi ine toni yemabasa kubva kuIT nyanzvi kusvika kune manejimendi kunyangwe Senior Management yemabasa. Mutengi wevatengi pamwe nemubatsiri wekuchenesa. Neiyi kambani zvechokwadi, iwe unogona kuwana chero chero basa. Rutivi rwoga rwusina kunaka iripo kune kwakaoma kubvunzurudzwa kupfuura. Padivi rakanaka, unogona kuwana webhusaiti yavo zvakanyatsogadzirwa. Uye iwe unogona kutarisa mamiriro ako ekushandisa pamwe nedata rako pachako. Kunyangwe kunyoreswa kwebasa kunoratidzika inowanikwa kune vanotsvaga basa. Uine izvi mupfungwa, iyo Emirates ndege inoshanda neDubai City Company nekuti ini ndinowanikwawo kwauri.
Tine nzvimbo chete kambani iyi pazasi pezvinyorwa. Nekuti iri kambani yeEurope saka ichi ndicho chikonzero nei kungave kwakaomesesa kuwana Visa muEurope. Padivi rakanaka, kambani iyi zvakare yakahwanda muMiddle East ne Egypt. Uye dzimwe nyika dzinoverengeka dzatisingakwanise kutarisa panguva yacho. Chokwadi United Arab Emirates, Kwata uye United States of America.
Nha. 20 Singapore Airlines Air Careers
Singapore Airlines kwete kuti vanhu vazhinji vanga vari pano nezve kambani iyi. Asi iyi kambani ine nyanzvi yekuvandudza mune yekupedzisira 20 makore. Pfungwa huru ndeiyi kubatsira vashandi kuwana kwavo kuzere kugona kukura. Sei iwe uchishanda navo iwe uchaita uye wakakura uye kuvandudza kune yega inopa zvakawanda pamusoro pekambani ino kunosimudzira nyanzvi yako kukuwana iwe. Uye kune wese munhu angade kutanga navo.
Iyo kambani inopa e yepamusoro dzidzo yekufanirwa. kazhinji kutaura, kana iwe uchitsvaga kambani uyo anokupa iwe vhiza kutsigirwa. Sezvazviri, Singapore Airlines inokuitira izvozvo. ivo havasi ivo chaivo akakodzera emirates emabasa ebasa. Asi zvirokwazvo yakakodzera kunyorera sewe unotsvaga basa. tarisa pazasi pane yavo webhusaiti uye iwe sarudza iwe pachako kuti zvakakodzera kana kwete.
Nha. 20 Qatar Airways Careers
Qatar yeEmirates ndege mabasa muMiddle East. Mazana emikana iripo muQatar. Iyi kambani inozivikanwa Around the Clock yavari chaizvo kutarisa kune mamaneja uye Bhizinesi Rekuvandudza bhizinesis. Technical engineering timu pamwe neairport services task staff, macabin crew management nemaoperatives. Parutivi rwakanaka rwekambani iyi, unogona kutarisa mune yako application. Gadza zviyeuchidzo zvebasa kana iwe uchizofarira ezvachauya mabasa. Nekuti panguva iripo hapana angakwanise kukupa iwe basa rauri kutsvaga semukadzi.
Sezvineiwo, ivo chete ndivo izvo zvinopa senguva yemberi basa rekuvandudza chirongwa pamukana webhusaiti. for zvechokwadi ichave yakakosha kuti uenderere kumberi uye unyorerenye kanenge 50 inosvika kuma 200 vacancies. Padivi risina kunaka, iyi iQatar saka hazvisi nyore kuwana basa. Zvizhinji vanhu kutenderera nyika vachitsvaga mukana unoshamisa munyika ino. Saka iwe uchafanirwa kurwa nemaIndia, Pakistani, nevamwe vamiririri ve Middle East manejimendi.
Mhedziso yeEmirates Airlines Careers
Muchikamu chino, tinoita mhedziso. Saka vazhinji vevanhu vari kutsvaga kuwana basa muiyo inokurumidza kukwira Ndege. Kazhinji kutaura akawanda mabasa ini ndanga ndichigovera semutyairi uye pane epasi zvinhu. Ndege makambani anoedzwa uye achikurumidza kuwedzera network. Uye kunyanya makambani muUAE. United States of America neEurope kusvika parizvino uye nekukurumidza nekukura kwemaairport services. Sezvineiwo, nerudzi urwu rwebhizinesi. Unogona kuongorora mabasa aripo muminda yakawanda. Parizvino iwe unowana zano uye kuronga mabasa.
Ndege nendege mashandiro emabasa. Unyanzvi hwekushanda mabasa uye akafanana akafanana rudzi rwebasa. Kuchengetedza munhandare yendege zvakare kwakakura kuita. kune rimwe divi, tine mabasa emhando yepamusoro. Kuronga kugadziriswa kwendege uye yeLogistics munda. Ipapo mabasa emakambani uye eVatengesi anodawo kuti uwane. Kuti uve wakanangana nemabasa mazhinji basa revatengi rinotariswa. Saka iwe semushandi iwe uchafanirwa kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi paAirport.
Dubai City Company yeJob Seekers
Dubai City Kambani inotarisira kukuona iwe mune edu akasiyana zvinyorwa. Yedu blog inowanzoitirwa Vashandi Vanotsvaga. Parizvino iwe unowana iyo yepamusoro makambani ekushandira. Ndinovimba, iwe wakanyorera kune ese emakambani atinopa. Nekuti isu tiri webasa rekuwana kambani uye kutsvaga basa kubatsira vamwe pakuwana mabasa anoshamisa. Yedu Kambani inosimbisa muDubai. Ichi chikonzero nei takaisa Emirates. uye isu tinodada kwazvo neiri bhizinesi. Zvakare, isu takabatsira kuvaka mhando dzinoverengeka kutenderera pasirese. Saka, iva mumwe yakawanda yedu basa Vanotsvaga basa kutenderera pasirese. Parizvino takabatsira Saudi Arabia basa Vanotsvaga basa. Zvakare neIndia-Pakistani seye nhamba yekutanga. The Philippines uye MaSouth Africa pamwe neIrania uye vagari vekuAmerica.
Ndichitarira mberi kukuona zvakare!
Kambani yedu inodada nechero yevatengi vedu. pamusoro 50,000 basa Vanotsvaga vakawana basa nekambani yedu. Yakanyorerwa chimwe nechikamu saka zvatiri kureva mune izvo. Kuinjiniya Marketing, Hutano hweVashandi, kuyamwisa, iyo, basa revatengi uye kudzidzisa. Services yatinopa nokuda kwenyika dzakawanda. chero chaunofunga kuti rudzii rwebasa raunoda kuwana nekambani yedu. Tiri kutsvaga kukupa izvo. Saka ramba uchienda uye utsvagire webhusaiti yedu. Nekuti isu tine zvakawanda zvinhu izvo zvinogona kukushandira. As Anotsvaga basa kupote nyika.